China Hydroxypropyl Methyl Cellulose ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ | Divenland
HPMC သည်အနံ့ဆိုး၊ အရသာမရှိ၊ အဆိပ်မဟုတ်သောအဆိပ်အတောက်မရှိသောဆယ်လူလာဆဲလ်အီများဖြစ်သောဓာတုဗေဒဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများမှတစ်ဆင့်သဘာ ၀ အဆင့်မြင့်မော်လီကျူးဆဲလ်များမှထုတ်ယူရရှိသည်။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောရေတွင်ပျော်ဝင်နေသောအဖြူရောင်အမှုန့်ဖြစ်သည်။ မျက်နှာပြင်လှုပ်ရှားမှု၏ထူ၊ စွဲကပ်မှု၊ ပြန့်ပွားမှု၊ emulsifying၊ ရုပ်ရှင်၊ ဆိုင်းငံ့ထားခြင်း၊ စုပ်ယူခြင်း၊ ဂျယ်လ်နှင့် protetive colloid ဂုဏ်သတ္တိများရှိပြီးစိုထိုင်းမှု function ဂုဏ်သတ္တိများကိုထိန်းသိမ်းသည်။
Hydroxypropyl methyl cellulose သည်သန့်စင်ပြီးသောဝါဂွမ်းမှထုတ်လုပ်သည့် nonionic cellulose အီဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အဓိကစွမ်းဆောင်ရည်မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
1. HPMC သည်အဖြူသို့မဟုတ်အဝါရောင်အမှုန့်ဖြစ်သည်။ အနံ့မရှိသော၊
(၂) HPMC သည်ရေအေးထဲတွင်လျင်မြန်စွာပျော်ဝင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ပွင့်လင်းမြင်သာသောဖြေရှင်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းသည်အချို့သော hydrophobic methoxy group ပါဝင်သောကြောင့်၎င်းသည်အချို့သောအော်ဂဲနစ်အရည်များတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သည်။
3. HPMC aqueous solution ၏ viscosity သည် PH3.0-10.0 ၏အတော်အတန်တည်ငြိမ်သည်။ PH တန်ဖိုးသည် ၃ ထက်နည်းသော ၁၀ ထက်ပိုသောအခါ၊
၄။ HPMC ၏ရေပျော်ရည်သည်မျက်နှာပြင်လှုပ်ရှားမှုရှိပြီး၎င်းသည် emulsification ရှိပြီး colloid ၏တည်ငြိမ်မှုကိုကာကွယ်ရန်။
၆။ HPMC သည် hydrophilic ဖြစ်ပြီးရေကိုထိန်းသိမ်းရန်အခန်းကဏ္playတွင်ပါဝင်ရန်အင်္ဂတေ၊ gypsum, paint နှင့်အခြားထုတ်ကုန်များသို့ထည့်သည်။
၇။ HPMC သည်အနာများဒဏ်ခံနိုင်ပြီးရေရှည်သိုလှောင်ရာတွင်ပါ ၀ င်သည်
၈။ HPMC သည်ပွတ်တိုက်အားကိုလျှော့ချနိုင်ပြီးဆောက်လုပ်ရေး၏ချောမွေ့မှုကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်
၉။ HPMC သည်ခိုင်ခံ့။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောပွင့်လင်းမြင်သာသောစာရွက်ကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်
Methoxycontent (WT%）) 28,0 - 30,0 27.0 - 30.0 19.0 - 24.0
Hydroxypropyl ပါဝင်မှု (WT%）) ၇.၀ - ၁၂.၀ ၄.၀ - ၇.၅ ၄.၀ - ၁၂.၀
ဂျယ်အပူချိန် (℃) 58,0 - 64.0 62,0 - 68,0 70,0 - 90,0
ခြောက်သွေ့ပြီးနောက်ကိုယ်အလေးချိန် (WT%) ≤ ၅.၀
အမှုန်အရွယ်အစား ≤ 100 ကွက်
PH (၁% ဖြေရှင်းချက်၊ ၂၅ ℃）) ၄.၀ - ၈.၀
ထဲမှာပါတဲ့ (2% ဖြေရှင်းချက်, 25 ℃）) 400 - 200000 mpa.s
* အပူလျှပ်ကာမော်တာ၊ ကြွေထည်ကြွေပြားကပ်ကော်၊ အေးဂျင့်၊ ထု၊ ဂျိုက်စ်၊ အင်္ဂတေ၊
* ဆေးသုတ်သည့်အထူ၊ အေးမြသောပစ္စည်းနှင့်တည်ငြိမ်မှု၊
* ပလပ်စတစ်မှိုမှိုလွှတ်ပေးသည့်အေးဂျင့်, ပျော့ပြောင်း, ချောဆီ။
* ဘိလပ်မြေ၊ ဂျိုက်စ်အလယ်တန်းထုတ်ကုန်၊
* ခေါင်းလျှော်ရည်, ဆပ်ပြာ
HPMC ၏ရေထိန်းပစ္စည်းသည်ဆောက်လုပ်ပြီးသည့်နောက်အလွန်မြန်သောခြောက်သွေ့မှုကြောင့်ခိုင်မာမှုကိုမြှင့်တင်ပေးသောကြောင့် putty အမှုန့်သည်အက်ကွဲလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်နှောင်ကြိုးတိုးတက်စေရန်အထောက်အကူပြုအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။
2. ပြင်ပမြို့ရိုးကို insulator တွင်လည်းစနစ်
HPMC ရေကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းထားခြင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးအချိန်ပိုမိုကြာရှည်နိုင်ခြင်း၊ ကြွေထည်များကိုရေများလျင်မြန်စွာဆုံးရှုံးခြင်းမှကာကွယ်ခြင်း၊
၄။ Gypsum base အင်္ဂတေနှင့်ထုတ်ကုန်များ
ဆွဲထားသည့် HPMC သည်ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းကြောင့်တည်ဆောက်ခြင်းမှဂယက်ထခြင်းကိုဖယ်ရှားပြီးပိုမိုထူထပ်သောအပေါ်ယံလွှာကိုအသုံးပြုနိုင်သည်
HPMC သည်မော်တာ၏ပျံ့နှံ့မှုကိုတိုးတက်စေခြင်း၊ စုပ်စက်လွှဲပြောင်းခြင်းကိုလွယ်ကူစေခြင်း၊ အင်္ဂတေ stratification နှင့် pipe plugging များကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်
HPMC သည်ဆေးကြောပြီးနောက် gypsum စာရွက်၏ကော်ပြားပိုင်ဆိုင်မှုကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်၊
အနိမ့် viscosity HPMC သည်မိုးရွာသွန်းမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီးမော်တာစီးဆင်းမှုကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။ ၎င်း၏ရေထိန်းထားမှုသည်အက်ကွဲခြင်းနှင့်ကျုံ့ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည်။
ရှေ့သို့ Redispersible အမှုန့်
နောက်တစ်ခု: SM-F ကို Superplasticizer
အစားအစာခုနှစ်တွင် Hydroxypropyl Methylcellulose
Hydroxypropyl Methylcellulose စျေး